Misa Kuita Cofttek
Cofttek holdings zvishoma
Kwemakore gumi apfuura, Cofttek yave iri kupa huwandu hunoshamisa hwekugadzira uye yekugadzira mabasa. Nhandare yedu yebasa inogona kubva kumabhegi maduku emamiriyoni kusvika kune matani emabasa makuru ekugadzira.
Ruzhinji rwevatengi vedu vari muNorth America, Europe, Aisa, kusanganisira Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer nedzimwe kambani yakakurumbira.
Zvose zvetsika yedu yekugadzira uye kushandiswa kwebasa zvinotungamirirwa mumamiriro ezvinhu ekunyarara kwakasimba. Mapoka edu emishandirapamwe akabatanidzwa anotsigirwa neboka rakanyatsoziva uye rakatsaurirwa remakemikari anoverengeka. Kushanda nemaitiro ane kutonhora kubva kune -100˚C kusvika ku 300˚C, uye zviyero zvinobva ku5L kusvika ku5000L, kukoshesa kunowanikwa kune vatengi kuburikidza nehutano hwemukati humba hwehukuru hwemapurogiramu epamusoro (kusvika pamatric ton ton) nekushanda chemishonga ingredients. Kushambadzira kunoitwa mune imwe nzvimbo yedu yekugadzira nzvimbo.
Isu tinogadzira mararamiro ekugadzirwa kwemakemikari kuti tikwanise kushandira purojekiti yako chaiyo inounikidzwa nehuwandu hwekukurumidza nekudhura paunosangana nepamusoro pemitemo yekuchengeteka nekuteerera kwekutonga. Kugadziriswa kwekugadzirwa kwemagetsi kunobvumira kushandiswa kwebatch sizes uye kuvandudzwa kwemhando yemhizha. Zvose zvinoitwa zvakagadzirirwa kutevera zvakasimba mitemo.
Muumbi weMakorokemu Anticancer Reagents uye Kinase Inhibitors.
Sezvo nyika inogadzirisa zvinogadzira zvinyorwa zviduku reticentracer reagents uye kinase inhibitors, Cofttek inopa zviuru zvezvikwata kumayunivesiti,
Tititirei kana Kuzadza Fomu
Usanonoka kutaura nesu
Block 2 yeWest Innovation Park, Henan National University Technology Park
© Copyright 2018 COFTTEK. Zvose Zvakachengetwa www.aasraw.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com